कानुन र मानविकी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्षको परीक्षाफल सार्वजनिक
काठमाडौं, माघ ११ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ साल चैत/वैशाखमा सञ्चालित कानुन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह द...
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का १५ जना कर्मचारीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बुधवार गरिएको पीसिआर परीक्षण गरिएका १५ कर्मचारीलाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय संसदका १५ कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । संघीय संसदका १५ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बुधबार गरिएको पीसिआर परीक्षण गरिएका १५ कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो ।उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
Ratopati 1 दिन पहिले
काठमाडौँ / सङ्घीय संसद् सचिवालयले कोभिड–१९ संक्रमणलाई हेक्का राख्दै यही वैशाख २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा सांसदका लागि सीट व्यवस्थापन गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको रायपरामर्शमा
Artha Dabali3दिन पहिले
३४ शाखा अधिकृतको सरुवा
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३४ जना शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले बुधवार सरुवा निर्णय गर्दै आज बिहीबार सरुवा गरिएका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गरेको हो । हेर्नुहोस् को कहाँ ?
Prashasan9दिन पहिले
यस्ता छन् संसदको सातौं अधिवेशनमा भएका काम (सूची)
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले सातौं अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सचिवालयले २०७७ फागुन २३ गते आइतबार देखि २०७८ वैशाख ६ सम्म भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी दिएको हो ।यस्ता छन् अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही : १. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७७ साल फागुन २३ गते आइतबार प्रारम्भ भई आज २०७८ साल वैशाख ६ गते सोमबारसम्म जम्मा ४४ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ९ दिनमा ९
आँखा पोल्ने धुलोले ढाक्यो काठमाडौंको आकाश
काठमाडौं । काठमाडौंं उपत्यकाको आकाश तुवाँलाले ढोकेको छ । शुक्रबार दिउसोदेखि आँखा पोल्ने तुवाँलेले आकाश ढाकेको छ । काठमाडौंमा घाम लागेको छैन भने हावा पनि चलेको छैन । वातावरणमा एक्कासी परिवर्तन आएपछि जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ । वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क अत्याधिक बढेका कारण तुवाँलो दोखिएको हो । वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रका अनुसार ललितपुरको भैंसेपाटीमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क (एयर क्यालिटी इन्डेक्स) ४७०, भक्तपुरमा ३०५, कीर्तिपुरमा २२१ र उपत्यका बाहिर सिमरामा २४८ पुगेको छ । जल तथा मौसम विभागले डढेलो तथा अन्य प्रदुषणका कारण तुवाँलो लागेको जनाएको छ । भारतको विहार,उत्तर प्रदेशलगायतका राज्यबाट फैलिएको वायु प्रदुषणले नेपाली आकाश पनि ढाकेको हो । लामो समयको खडेरीले हावा सुख्खा भएको र वायुले धुवाँ र धुलो ल्याएका कारण काठमाडौंको वायु प्रदुषण भएको मौसमविदले जनाएका छन् । यस्तो बेलामा सकभर घरबाहिर ननिस्कन मौसमविदले सुझाव दिएका छन् । वायु प्रदुषणका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको छ । दिउँदा २ बजेदेखि भिजिबिलिटी कम हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न नसकेको विमानस्थलले जनाएको छ ।
गोरु भीडतिर गएपछि… (फोटो फिचर)
१ माघ, काठमाडौं । माघे संक्रान्तिको अवसरमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३, तारुकामा गोरु जुधाइएको छ । गोरु जुधाउन फाँटमा लैजाने वेला एउटा गोरु भीडतिर भागेपछि दर्शकको भागाभाग भएको थियो । त्यसक्रममा तीन जना घाइते समेत भएका छन् । तारुकामा हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिका दिन गोरु जुधाउने गरिन्छ । गोरु जुधाइ हेर्ने धादिङ, काठमाडौं, चितवनलगायतका ठाउँबाट समेत […]
१९ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । तर, अधिवेशन सुरु हुन नपाई अन्त्य गर्ने हतारो सरकार र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैलाई छ । सरकारको नियत त चाँडो अन्त्य गर्ने नै भयो, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना स्वयं पनि सकेसम्म छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्ने मुडमा छन् । सातौं […]